Wararkii Ugu Danbeeyey Ee Dhanka Suuqa Kala Iibsiga Iyo Kooxo Badan Oo Sii Calaamadeysay Xidigaha Ay Doonayaan
HomeSuuqa kala iibsigaWararkii ugu danbeeyey ee dhanka suuqa kala iibsiga iyo kooxo badan oo sii calaamadeysay xidigaha ay doonayaan
November 23, 2020 Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
– Miyay Real Madrid raadineysaa bedelka 35 jirka khadka dhexe ee Luka Modric? Fichajes.net ayaa warinaya in Madrid ay u aragto ciyaaryahanka khadka dhexe ee Lazio Sergej Milinkovic-Savic inuu yahay bedelka ugu fiican ee xiddiga reer Croatia Modric.
– Barcelona ayaa isku dayi doonta inay lasoo saxiixato daafaca Manchester City Eric Garcia bisha Janaayo iyadoo ay jirto dhibaato dhaawac oo dhanka daafaca ah, sida laga soo xigtay Sport. Gerard Pique (jilibka) iyo Sergi Roberto (bowdada) ayaa labadoodaba dhawac ku maqnaan doona. Dhanka kale, Marca ayaa sheegaysa in Barcelona lagu wado inay kulan iskugu yimaadeen si ay go’aan looga gaarto haddii ay la soo saxiixaneyso bedelka Pique.
– Fabian Ruiz wuxuu wacdaro ka dhigay kooxda Napoli, taasoo keentay inuu xiiso ka helo meelo kale. CalcioMercato ayaa warinaysa in Paris Saint-Germain ay wali bartilmaameedsanayso xiddigan khadka dhexe.
– Iyadoo aan hubin mustaqbalkiisa kooxda Inter, Christian Eriksen ayaa lala xiriirinayaa inuu ku laabanayo Premier League. Corriere dello Sport ayaa warinaysa in kooxaha Man United iyo Arsenal ay ka fiirsanayaan xiddigii hore ee kooxda Tottenham.
– Iyadoo Memphis Depay iyo Moussa Dembele lala xiriirinayo dhaq dhaqaaq, Lyon waxaa laga yaabaa inay isha ku hayso bedelkiisa. Le 10 Sport ayaa sheegeysa in Reims iyo weeraryahanka reer Senegal Boulaye Dia iyo weeraryahanka Leicester City Islam Slimani ay labaduba bartilmaameed u yihiin.